APICMO Ndị ahịa anyị na-emepụta ọgwụ maka CMO / CDMO Intermediates
COMBI-BLOCKS bụ onye na-eme nchọpụta nke na-eme nchọpụta na ndị na-edozi ụwa nke ndị na-emepụta ụlọ, ndị na-emepụta ihe na ndị dị mma.
KDC, Ụlọ Ọrụ Specialized Chemicals Importing, malitere na 1990.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ahịa nke Israel nke dị na Petah Tikva, Israel. Ọ bụ nnukwu ndị na-emepụta ọgwụ ọjọọ na ụwa na otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma na 15 n'ụwa niile.
Hoffmann-La Roche AG bụ ụlọ ọrụ nlekọta ahụ ike nke Switzerland nke na-arụ ọrụ n'ụwa nile n'okpuru abụọ nkewa: Ụlọ ọgwụ na Ọrịa. Roche bụ ụlọ ọrụ ụlọ ahịa nke atọ kachasị elu n'ụwa niile.
GlaxoSmithKline plc (GSK) bụ ụlọ ahịa na-ahụ maka ọgwụ na Britain nke dị na Brentford, London. GSK bụ ụlọ ọrụ na-ere ọgwụ nke isii kasị elu n'ụwa nke 2015
Sun Pharmaceutical Industries Limited bụ India nke na-ere ma na-ere ụdị ọgwụ na ọgwụ ndị na-arụ ọrụ (API) karịsịa na India na United States.
Alfa Aesar, nke dị na Ward Hill, Massachusetts, United States, bụ onye na-azụ ihe ntanetị na ihe ndị eji eme nnyocha na mmepe, na nyocha. Ha nwere ụlọ ọrụ na ọtụtụ mba ma rụpụta ọtụtụ n'ime ọgwụ ndị ha na-ere.